Atody : Tsy tokony hihoatra ny 3 isan-kerinandro
Mpikaroka maro no efa nanadihady mahakasika ny isan’ny atody tsara hohanina. Tsy mitovy avokoa ny valin-tenin’izy ireo. Ity entina aminao ity dia vokatry ny fikarohana natao vao haingana ary nivoaka tao amin’ny gazety boky medikala JAMA.
Ireo sakafo toa maivana fa be menaka
Efa miezaka manamboatra ny sakafo ho voalanjalanja sy ho ara-pahasalamana ianao.
Menaka kôkô, mahasalama, tsy mampatavy
Ahosotra amin’ny volo ihany no tena heverina fa fampiasana ny menaka na ny diloilo kôkô. Marobe anefa ny tombontsoa azo avy amin’ny fihinanana ity menaka ity.
Antony 5 mahatonga ny olona hihatavy
Matetika ny hampihena tena foana no mahamaika.
Sakafo 8 misoroka ny homamiadana
Ahoana ny atao raha te-hiaro ny tena tsy ho voan'ny homamiadana ? Azo atao amin'ny alalan'ny fitandremana ny sakafo sy fanaovana fampihetseham-batana matetika izany. Ireto misy sakafo misoroka manokana ny homamiadana.
Malaza tokoa ny kibon-dabiera. Tsy marina izany hoy ireo mpikaroka. Araka ny fikarohana nataon’izy ireo mantsy dia tsy mampiova ny haben’ny vatana ny fisotroana labiera amin’ny fatra antonony. 100 kaloria no entin’ny labiera tapa-litatra. Ny fomba fisakafo no mampatavy. Nisy fikarohana iray natao tamin’ny vehivavy maromaro eo anelanelan’ny 18 sy 40 taona avy ao Grenoble iray hafa nampivoitra fa mampihena ny tahan’ny menaka kolesteroly ao anaty rà ny misotro labiera iray tavoahangy amin’ny sakafo atoandro. Tokony ho mailo ihany anefa satria natao tamin’ny vehivavy miisa 24 monja ity fanadihadiana ity.
Araka ny fikarohana hafa dia toa miaro amin’ny aretin’ny fo sy ny lalan-drà koa ny labiera. Be vitamina sokajy B mantsy ao anatiny. Ireny karazana vitamina ireny no mampihena ny tahan’ny « homycystéine », singa iray ao anaty rà izay fototry ny olan’ny lalan-drà isan-karazany. Nanamarika koa anefa ireo mpikaroka fa ahitana vitamina sokajy B koa ny anana sy ny legioma maitso ka tsara kokoa ny mihinana legioma sy voankazo isan’andro toy izay hisotro labiera matetika.
Misoroka diabeta sy homamiadan’ny « colon »
Araka ny fikarohana nataona amerikanina dia miaro amin’ny diabeta sokajy roa ny fisotroana labiera amin’ny fatra antonony. Manafaingana ny fipoirany kosa ny fisotroana alikaola mahery. Nisy fikarohana hafa koa naneho fa mety mampihena ny taha hahazoana ny homamiadan’ny “colon” ny fisotroana labiera amin’ny fatra antonony satria be mpanala arafesina ny labiera. Marihina anefa fa voalavo ihany no nanaovana ity andrana ity fa tsy mbola natao tamin’olona kosa.
Manadio ny ao anaty
Mampivalan-drano betsaka ny labiera noho ny fiasan’ny « houblon » izay manetsika ny voa. Tsy mbola voaporofo ara-tsiantifika kosa anefa izany fa ny hany azo antoka dia ny rano ao anatin’ny labiera no anisan’ny mampivalan-drano azy betsaka koa.
Manamafy ny taolana
Be silicium sy phytœstrogènes ny labiera. Ireo singa ireo no mampivelatra sy miaro ny taolana amin’ireo aretina mety mahavoa ny taolana toy ny ostéoporose. Araka ny fikarohana natao tao amin’ny Oniversiten’i Californie izay nivoaka tamin’ny 2009 dia hita fa matevina kokoa ny taolan’n yvehivavy misotro labiera noho ireo tsy misotro izany mihitsy.
Fatra antonony ihany
Tsy famporisihina hisotro labiera mihitsy akory ity lahatsoratra ity. Ary tena manamarika mihitsy ireo mpikaroka fa fatra antonony ihany no ahafahana mahazo ireo tombotsoa avy amin’ny labiera voatanisa ireo. Tsy hahazoana tombotsoa mihitsy rahateo ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola amin’ny fatra betsaka fa vao maika manimba.